Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iindaba » Izibonelelo zokukhetha inkqubo ye-invoyisi ezenzekelayo
Kwilizwe lokuthenga nge-Intanethi, kuye kwabaluleka ngakumbi kunangaphambili ukuba nenkqubo ye-invoyisi ehlaziyiweyo kunye ne-automated.
Zeziphi izibonelelo zokuzenzekelayo inkqubo yakho yokwenza i-invoyisi?
Okokuqala, akukho nto inokuphika ukuba i-automation iya kukugcinela ixesha elininzi, into exabisekileyo kuye nawuphi na umnini-shishini.
Kuthatha imeko yomntu ekuqhubekeni nesiphumo sokuncitshiswa kwamathuba eempazamo.
Nokuba ungathanda ukuba ishishini lakho libe lide kangakanani, kukho izinto ezithile ezingcono ngazo zonke iindlela ukuba zizenzekelayo, kwaye i-invovoing yenye yazo.
Inkqubo yokufaka invoyisi ngokuzenzekelayo kuye kwaziwa ukunciphisa iimpazamo kunye neendleko zokusebenza ngama-50%, kwaye lelo lixabiso elibalulekileyo ongafanele ube ngumceli mngeni.
Ukuba awukayazi ngokupheleleyo malunga umenzi we-invoyisi kwaye kunokuba luncedo kangakanani kulo naliphi na ishishini kodwa ngakumbi amashishini amancinci, emva koko uye endaweni elungileyo.
Kule nqaku siza kuqwalasela ukuba kutheni kufuneka ukhethe inkqubo ye-invovo ezenzekelayo ngaphezulu kwencwadana yemigaqo, kwaye zonke iindlela ziya kusebenza kwaye zinengqondo kwishishini lakho.
Igcina ixesha elininzi
Akunakuphikwa ukuba uya konga ixesha elininzi xa utshintshela kwisoftware ezenzekelayo. Kwihlabathi leshishini ixesha eligciniweyo likwalingana nemali egciniweyo, kwaye kuya kufuneka uzame ukwenza izigqibo eziya kwenza ukuba oku kwenzeke.
Ukuba awuyiqondi indlela isoftware yokwenza i-automated eya konga ngayo imali, siya kuyichaza le nto ngamagama alula. Xa iqela lakho kungafuneki lichithe ixesha elininzi kunye nomzamo wokugcina umkhondo wee-invoyisi, oko kukhokelela ekunciphiseni kweendleko zabasebenzi. Okanye banokujolisa ingqalelo yabo kwizinto ezibaluleke ngakumbi eziza kunceda ishishini lakho ngezinye iindlela. Ekuhambeni kwexesha, oku kuya kuba nefuthe elihle kumgca wakho ongezantsi.
Mhlawumbi esinye sezizathu eziphambili zokutshintshela kwinkqubo ezenzekelayo kukugcina ixesha kwaye oku kuyasebenza nakwii-invoyisi.
Ukuncitshiswa kwamathuba eempazamo
Yinto yabantu ukwenza iimpazamo kunye neempazamo, kodwa ngamanye amaxesha ezona mpazamo zincinci zinokuphela zibiza ishishini kakhulu, ngokwexesha nemali.
Ngee-softwares ezinje ngeBilldu, ungawanciphisa kakhulu amathuba ezimpazamo kwaye ube nenkqubo elungelelanisiweyo yokugcina umkhondo wazo zonke iindleko kunye nemali engenayo.
Le suti inkulu kakhulu yezi softwares kuba zikuvumela ukuba ulawule zonke izinto ezisebenzayo kwiqonga elinye.
Njengeshishini elincinci, ngokuqinisekileyo le yinto oya kuthi uzuze kuyo ngokuchasene nokuba neqonga elininzi lezinto ezahlukeneyo.
Ukufikelela kwiimpawu zokunika ingxelo
Nge Inkqubo ye-invoyisi yesandla, Kuya kufuneka ungene kwiingxaki ezininzi ukwenza ingxelo ukubonisa abanye abachaphazelekayo kwishishini lakho, okanye nokuba ufuna ukuzibonela.
Ii-softwares ze-invoicing ziya kuba nezinto ezakhelweyo eziza kukuvumela ukuba uvelise ingxelo entle echaza yonke imisebenzi yakho yeshishini kwimizuzwana embalwa. Oku kuya kukunika isishwankathelo esihle sokusebenza kweshishini kunye nokuvumela ukuba wenze nayiphi na into yepl